Ciidamada Maraykanka oo soo gaba gabeeyay ka bixitaankooda Soomaaliya - Tilmaan Media
Taliska ciidamada Maraykanka ayaa sheegay gabi ahaanba ciidamadoodu ka baxeen Soomaaliya. Arintaan ayaa ka dambaysay kadib amar kasoo baxay madaxwaynaha xilka ka dagaya Donuld Trump.
Khubrada dhinaca amniga ayaa ka digaya in saaridda 700 oo askari oo Maraykan ah ay dhabar jab ku noqon karto guulihii laga soo hooyiyay ladagaalanka Alshabaab sanadihii lasoo dhaafay. Waxaana la isku raacsan yahay in ciidamda Soomaalidu aysan wali isku filnaan.
Ciidamada Maraykanka ayaa taageero tobabar iyo hawlgal ba u fidin jiray ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Soomaaliya ee loo yaqaan Danab. Sidoo kale waxay fulin jireen weerar dhinaca cirka ah oo lagu beegsanayo xarumaha iyo madaxda Alshabaab.
Taliska ciidamada Maraykanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah Alshabaab iyo taageeridda ciidamda Soomaaliya. Ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya ka baxay ayaa loo daad gureeyay dalalka dariska la ah Soomaaliya sida Kenya iyo Djibouti.
Waxaan wali la ogayn tallaabada uu qaadi doono madaxwaynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden kadib markuu xilka la wareego 20 bishaan Janaayo.